Nakhu Esikwenzile Ukuphindaphindeka Kwezithuthi Eziphilayo Ezithathu | Martech Zone
NgoLwesine, ngo-Okthoba 30, 2014 NgoMgqibelo, Januwari 14, 2017 Douglas Karr
Unyaka odlule kube ngomunye lapho besisebenza ngokungakhathali kumakhasimende… kangangoba sesivame ukungawanaki amagceke akithi angemuva. Martech Zone kungukushicilelwa okuphawulekayo okuthunyelwe ngama-blog okuyizinkulungwane ezimbalwa eminyakeni eyishumi. Sithuthe ukusingathwa, sashintsha izingqikithi kaningana, saguqula ama-plugins ethu ngaso sonke isikhathi, futhi saba nezinga elimangalisayo kwesinye isikhathi nokukleliswa kabi kwabanye.
Ngokweqiniso impela, angikunakanga kangako ukusesha ngoba besinezikhundla ezithile ezinhle kanye nezithameli ezithandekayo ezibhaliswe nge-imeyili, uhlelo lokusebenza lweselula, i-podcast kanye nevidiyo. Kepha besisebenza ngokungakhathali kule ndawo ezinyangeni ezimbalwa ezedlule ukulungiselela ushintsho oluzayo lwedizayini, asikwazanga ukusiza ukuqaphela ukuthi ushintsho ebesilwenza lube nomthelela omkhulu ezingeni lesiza kuzinhlanganisela zamagama ayizinkulungwane ezimbalwa - abaningi bancintisana kakhulu.
Asizange sithuthukise ngokuhlelekile isiza futhi saqapha amazinga, ngakho-ke angikwazanga ukukutshela ukuthi iyiphi inhlanganisela noma into eyodwa enomthelela omkhulu. Ngingakutshela nje ukuthi ngemuva kokwenza zonke lezi zinto, izinga lethu lenyuke kakhulu. Nginesiqiniseko sokuthi ezinye zazo azenzanga mehluko, kepha angikwazi ukusho ngokuqiniseka kwezibalo. Ngakho-ke - ngizokwabelana ngezinguquko ngendlela engikholwa ukuthi yenze umehluko omkhulu.
Izixhumanisi zeDisavow - ukuba nama-backlinks amabi akusho njalo ukuthi ukhonjisiwe, kungahle kukubambe. Senze ukuhlolwa kwe-backlink sisebenzisa Xhuma i-Detox futhi ngavumela zonke izixhumanisi kumasayithi abonakale e-sketchy futhi enethoni yezixhumanisi eziphumayo.
Isitifiketi Esivikelekile - isiza sethu manje sesiphephile ukuba ufake isitifiketi se-SSL futhi ngisebenza ezinkulungwaneni zokuthunyelwe okwakushumeke okuqukethwe okuvela emithonjeni engavikelekile.
Izihloko Eziyimpinda Engaguquki - sibe nenkinga enkulu ngendikimba yethu yamanje namathegi esihloko aphindwe kabili nge-pagination embi kuyo yonke indawo. I-pagination inikeze isihloko esifanayo kuyo yonke imiphumela ekhangisiwe. Bengazi ngodaba izinyanga kodwa bengingakafiki ukukulungisa ngoba bekungathinti abafundi bethu (hhayi abantu abaningi abachofoza izixhumanisi zobuqaba).
Ukucindezelwa kwesithombe - sithumele i isixazululo sokucindezelwa kwesithombe esizeni. Ngawo wonke ama-infographics esiwabelana ngawo, amanye amasayizi wethu wefayela ayemakhulu futhi enza amakhasi alayishwe kancane.
Kususwe Ukuqoshwa Kwekhasi - besingalandeli cishe konke ukuxhumana okuphumayo kusayithi nezinto eziningi zokuzulazula. Ngisuse zonke izimfanelo ezingenalutho ngaphandle kokukhangisa kwethu.
Izicelo ezehlisiwe zeSkripthi ne-CSS - lena isekude ukuphela, kepha besinama-plugins ambalwa - kufaka phakathi imenyu yethu eyinhloko - ebinemibhalo eminingi nezicelo ze-CSS. Sisenethani engifuna ukulinciphisa, kepha manje sesinengxenye yezicelo lapho ulayisha ikhasi.
Kususwe Okuqukethwe Okudala - besinethani lezindatshana kubuchwepheshe obungasekho. Sinciphise inani lethu lokuthunyelwe okuphelele kusayithi ngamaposi angaphezu kwe-1,000 XNUMX ngonyaka odlule. Okuningi akuhlali kungcono ngaso sonke isikhathi - ikakhulukazi uma unokuqukethwe okuningi okunganakwa. Okuthunyelwe okwakungekho ukuhlanganyela komphakathi, akukho ama-backlink noma okuthunyelwe mayelana nobuchwepheshe obungasekho kuyasuswa.
Yini esiyenzayo ngokulandelayo ukusiza?
Into emnandi ngalo msebenzi ongenhla - ngaphandle kokuvikela nokuvikela isiza - umsebenzi onzima kakhulu bekuwukuthuthukisa ulwazi lomfundi kusayithi. Ngokulandelayo siyabuyela emuva futhi siqinisekisa ukuthi konke okuthunyelwe kunesithombe esihle esifakiwe esihambisana nakho futhi sabelana ngokuthunyelwe okudala okusasebenza - sizama ukubanaka ukuze siqinise igunya lokuqukethwe esikufaka emzamweni!
Ngenkathi nginethemba lokuthi konke lokhu kusebenzile, kuhlale kunokwenzeka kude ukuthi amanye amasayithi ebesincintisana nawo avele ahlaselwa ngezibuyekezo ze-algorithm, futhi!
Yiziphi izigaba zokuqukethwe ezibandakanya kakhulu ku-inthanethi nakuselula?
Nov 3, 2014 ngo-9: 05 AM
Lolu uhlu olukhulu lokuthola i-bang yakho esheshayo - ukweba ngokuphelele lokhu. Kubantu abaqala nje bengingangeza: bamba ungene kumathuluzi wakho we-Google Webmaster uma ungekho ezinyangeni ezimbalwa ezedlule.
Nov 10, 2014 ngo-8: 20 PM
Siyabonga ngeposi uDoug. Ngabe ungakhuluma kabanzi ngezixhumanisi ezingalandelwa? Senze umkhuba wokwenza izixhumanisi eziningi zangaphandle zingalandeli futhi, noma sinciphise kakhulu inombolo ngokuthunyelwe ngakunye ukusiza ukufakazela ukuthi ibhulogi ibikhuluma ngani ngempela, kepha ngokuya ngalokho okushilo ngenhla, kufanele siguqule imikhuba yethu?
Nov 11, 2014 ngo-8: 46 AM
Matt Cutts unikeze ukuqonda okwengeziwe kokungalandelwanga kule vidiyo okungiholele ekutheni ngishintshe eyami. Ngangivame ukukholelwa ukuthi izixhumanisi ezilandelwayo zazifana "nezimbobo" kusayithi lami lapho ngangithululela khona igunya emithonjeni. Umbono wami manje ukuthi iGoogle iyazi ukuthi indawo okuya kuyo ifanele yini noma cha futhi ifanelwe udumo. Uma wenza konke nge-nofollow, ngiyaqiniseka ukuthi i-Google iyazi ukuthi uzama ukumane udlale uhlelo noma cha. Futhi, ngicabanga ukuthi izikhangiso kufanele zihlale zinezeluleko ze-Google ngaso sonke isikhathi. Konke okunye, angisazethembi kangako. Ngiyethemba lokho kuyasiza! Ungahlola njalo ubone! Basuse bese ulinda amasonto ambalwa ukuze ubone ukuthi kwenzekani!